नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजार पुग्न सक्ने ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजार पुग्न सक्ने !
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजार पुग्न सक्ने !
काठमाडौं, ९ जेठ । निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) अध्यक्ष वसन्त चौधरीले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजार पुग्ने अनुमान गरेका छन् । उनले नेपाल खबर अनलाईसंगको अन्तरवार्ताको क्रममा यस्तो कुरा बताएका छन् । नेपाल खबर अनलाईनले उनीसंग कोरोनाको कहरबीच निजी अस्पतालको भूमिकाका विषयमा अन्तरवार्ता लिएको थियो । सो क्रममा उनले यस्तो बताएका छन् ।
लकडाउन लम्बिरहँदा पनि संक्रम’ण कसरी फैलिरहेको छ ? भनेर सञ्चारकर्मी सन्तोष न्यौपानेले सोधेको प्रश्नमा उनले यस्तो भनेका छन्, सँग हाम्रो परीक्षण र ट्रेसिङको दायरा बढाउनु पर्ने थियो। हामीसँग भएको पूर्वाधार, जनशक्तिका कारण सक्नेजति काम भएको छ। यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेका मान्छेलाई तारिफ नै गर्नुपर्छ। सिमित साधनस्रोतका बाबजूद काम भइरहेको छ। जनसंख्याको आधारमा अन्य देशले गरेको परीक्षण र कम्युनिटी ट्रेसिङसँग तुलना गर्दा हाम्रो देशले पनि धेरै राम्रो गरेको छ। भलै हामीले आरडीटी बढी र पीसीआर कम गर्‍यौँ। पीसीआरको सुविधा सुरुदेखि थिएन।
अहिले जसरी रफ्तारले बढेको छ, त्यसअनुसार परीक्षण बढ्छ र त्यसअनुसार सं’क्रम’ण केस पनि आउँछ। एक पटक त’र्साउने खालको संख्या पनि आउँछ। एक पटक संक्रमितको संख्या ५ हजार पुग्छ भन्ने आकलन उच्चस्तरीय समितिमा अनौपचारिक रुपमा भएको छ। त्यो भन्दैमा हामी त’र्सिनुपर्ने, आ’त्तिनुपर्ने अवस्था छैन। होमवर्क गर्न केही ‘फिगर’ त चाहिन्छ। होमवर्क गर्न त्यो ‘फिगर’लाई मानेर गरिएको छ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त्यही स्तरको तयारी गर्न सुझाव पनि दिएका छौँ। सरकारले जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि सबै तरिकाले त्यसलाई काबुमा ल्याउन सक्छौं भन्ने दृढसंकल्प गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार तयारी पनि गर्नुपर्छ।
चैतको घरभाडा मिनाहा भए/नभएको अनुगमन गर्दै स्थानीय तह
नेपालको चे तावनी पछि भारतले आफै भत्काउन थाल्यो दशगजा मिचेर बनाएको बाँध
कोरोना संक्रमणबाट बेलायतमा ३२ वर्षीया नेपाली युवतीको निधन
४० हजार नागरिक स्वदेश फर्कने सरकारको अनुमान, जुन ५ बाट ल्याउने तयारी;मलेसियाबाट ७ हजार